Fahasalamana ara-pananahana – Miha mahazo vahana ny firaisana ara-nofo eo amin’ireo tanora tsy ampy taona - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fahasalamana ara-pananahana – Miha mahazo vahana ny firaisana ara-nofo eo amin’ireo tanora tsy ampy taona
Mampanahy ny tarehimarika. Tanora vavy latsaky ny 18 taona, miisa iray ao anatin’ny telo no efa nitondra vohoka indray mandeha raha kely indrindra, raha ny antontan’isa farany tamin’ny taona 2009. Mitombo hatrany anefa io isa io. Manaitra ihany koa ny fahafantarana fa ny 17,6%-n’ny tanora vavy sy ny 9,1%-n’ny tanora lahy latsaky ny 15 taona, no efa nanao firaisana ara-nofo avokoa.
«Ny tsy fahampian’ny fahalalan’ny tanora no antony tena mahatonga ireo tranga ireo», hoy ny Dr Tifana Marie Ange, talen’ny fampivoarana ny tanora eo anivon’ny minisiteran’ny Tanora sy ny ala voly. Isan’ireo mijoro vavolombelona amin’izany i Tiana, tovovavy 14 taona voatery nanambady tovolahy 21 taona, noho ny fitondrana vohoka tsy niriana. « Tany an-tsekoly no nihaonanay. Samy mianatra ao amin’ny kilasy 5ème ao amina sekoly iray. Bevohoka aho ary tsy nanaiky ny ray aman-dreniko, ka voatery natao ny raharaha. Izahay anefa tsy manana antom-pivelomana fa mbola eo ambany fiahian’ny ray aman-dreniny ary tena sahirana tokoa », hoy ny fitantarany.
Maro ny voka-dratsy ateraky ny fitondrana vohoka aloha loatra. Vehivavy 10 no mamoy ny ainy isan’andro, ateraky ny fahasarotana eo am-piterahana. Ny telo amin’ireo anefa dia tovovavy latsaky ny 18 taona avokoa. Mahakasika ireo trangana sida indray dia fantatra fa ireo tanora 20-29 taona no ahitana ny maro an’isa indrindra amin’ireo tranga vaovao mitondra ny Vih, ary ireo tovovavy ny ankamaroany. Noho ny fahasahiranan’ny tanora ihany koa dia tanora latsaky ny 19 taona avokoa ny 18,6%-n’ireo mivaro-tena. Ny fahatsapana ireo olana iainan’ny tanora ireo indrindra no nahatonga ny sampan-draharahan’ny Firenena Mikambana manokana tetikasa maro mahakasika ny fampivoarana ny tanora sy manohana ny minisitera tompomarika.
Mifanome tanana hanamarika ny Andro eran-tany ho an’ny tanora, any Antsiranana ny 11 sy 12 aogositra izao ny minisiteran’ny Tanora sy ny ala voly, miaraka amin’ireo sampan-draharaharan’ny Firenena Mikambana miasa eto Madagasikara (Unicef, Pnud, Unfpa, Bit). Tanora 100 no hampiofanina momba ny fahaiza-mitarika sy ny fitantanan-draharaha ao anatin’izany. Hisy ihany koa ny fihaonamben’ny tanora, hamosahany hevitra hikendrena ny fomba hampivelarana azy ireo, ho amin’ny fampandrosoana.
Fahasalamana, Mpanoratra Rijakely, 07.08.2012, 08:55	FIARAHAMONINA